Wararka - CSM + WRE
E-Glass la jarjaray oo loo yaqaan 'Strand Mat' waa dhar aan la tolay oo ka kooban istaandarro la jarjarey oo si aan kala sooc lahayn loo qaybiyey oo ay weheliso budada / emulsion galka
Waxay ku habboon tahay UP, VE, EP, cusbada PF. Wareegga duubku wuxuu u dhexeeyaa 50mm ilaa 3300mm, miisaanka culeyska ayaa u dhexeeya 100gsm ilaa 900gsm. Balladhka caadiga ah1040 / 1250mm, miisaanka duudduuban 30kg. Waxaa loogu talagalay in loogu isticmaalo jiifka gacanta, wareejinta fiilada, isku xoqidda iyo geedi socodka laminating joogto ah.
1) Burburka degdega ah ee styrene
2) Awood xoog leh, oo u oggolaaneysa isticmaalka habka gacanta loo dhigo si loo soo saaro qaybo ballaaran
3) Wanaagsan oo qoyan-dhex mara oo si dhakhso leh qoyan ugusoo baxa weelka, heshiis kiro hawo deg deg ah
4) Caabbinta daxalka badan ee aashitada
Isticmaalka dhamaadka waxaa ka mid ah doonyaha, qalabka qubeyska, qeybaha gawaarida, dhuumaha kiimikada u adkeysanaya kiimikada, taangiyada, munaaradaha qaboojinta iyo qeybaha dhismaha.
Waxaa jira farqi ku saabsan adkaanta iyo jilicsanaanta fijarka dhalada ah ee la jarjaray, oo ay ugu wacan tahay wakiilada daaweynta dusha sare ee fijarka dhalada. Sida loogu talagalay jirkii hore ee FRP, waxay guud ahaan jecel yihiin jilicsanaanta jilicsan ee la jarjaray, taas oo sahlaysa in lagu dhejiyo caaryada iyo booska geeska. Tani waa qodob is burinaya. Haddii ay ka jilicsan tahay, waxay ka dhigan tahay in gogosha la jeexay ay xoogaa jilicsan tahay ama aysan lahayn haraaga fiber, oo aysan lahayn wax taabasho ah. Shayga wakiilka ah waa budo jarjar gogol xarig ah.
Emulsion-ka la dareemay ayaa xoogaa adag, laakiin waa iska fidsan yahay. Inta badan shaqaalaha fiberglass-ka waxay jecel yihiin emulsion-ka maxaa yeelay way fududahay in la jaro fiberglass -kuna meel walba kuma duuli doono.
Gaar ahaan marka la eego heerkulka hooseeya, fiilada dhalada ayaa ka adkaan doonta sidii caadiga ahayd. Waxaa guud ahaan lagugula talinayaa inaad sidan u dooratid: marka laga hadlayo qaab dhismeedka isku dhafan iyo qaab dhismeedka wax soo saarka, waxaad dooraneysaa budo la dareemay inay si fiican u qoyso, sidoo kale waxay ku habboon tahay in dhumuc weyn la dhigo Qaab dhismeed ballaaran oo siman oo waxsoosaarka wax soo saarka ah, waxaad isticmaashaa emulsion dareemid waxay noqon doontaa mid deg deg badan oo raaxo leh.
E-Glass-ka tolmo wanaagsan ee Govings waa dhar laba geesood ah oo lagu sameeyay isweydaarsiga xargaha tooska ah. WRE waxay la jaan qaadi kartaa polyester-ka unsaturated, vinyl ester, epoxy iyo phenolic resins.
1) Wareegyada iyo xargaha goosgooska ah ee iswaafajinaya si siman oo siman, taasoo keentay xiisad isku mid ah
2) Feerooyin si isdabajoog ah isuwaafajiyay, taasoo keentay xasilloonida cabbirkeedu sareeyo iyo in si fudud loo maareeyo
3) Qalabaynta wanaagsan, dhakhsaha oo dhammaystiran qoyan ee cusbada, taasoo keentay wax soo saar sarreeya
4) Qalabka farsamada wanaagsan iyo xoogga sare ee qaybaha
WRE waa xoojin waxqabad sare leh oo si ballaaran loogu adeegsado gacmo dhigista iyo geedi socodka robot si loo soo saaro doomaha, maraakiibta, diyaaradaha iyo qeybaha gawaarida, qalabka guryaha iyo isboortiga.
Muunad bilaash ah ayaa loo heli karaa CSM iyo WRE. Ballaca iyo culeyska cirifka ayaa laga beddeli karaa. Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan si xor ah u nala soo xiriir.